25ka Shabakadaha Kaaliyaha Virtual ee ugu sarreeya - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn 25ka Shabakadaha Kaaliyaha Virtual ee ugu sareeya
Isha Sawirka: thewealthcircle.com
Dhab ahaantii qof walba wuxuu ka shaqeeyaa internetka mana arko baahida loo qabo lahaanshaha xafiis jireed ama lahaansho koox gudaha ah oo ka caawisa shaqadooda.
Haddii ama markaad doorato inaad eegto shaqsiyaadka aadka u guulaystay ee kugu xeeran, waxaad ogaanaysaa inay dhammaantood leeyihiin dabeecad keli ah oo leh kaaliye ama hab caawimaad.
Waxaa mudan in la ogaado in aadan si weyn u saari karin muhiimada ay leedahay kaaliyaha maadaama ay kaa caawineyso inaad daryeesho dhammaan baahiyahaaga, oo ay ku jiraan hubinta iimayladaada, jadwalka balamaha, iyo iwm.
Intaa waxaa dheer, kaaliye si isku mid ah ayaa kuu oggolaanaya fursad iyo waqti badan oo aad xoogga saarto waxa kale oo aad u aragto inay aad muhiim u yihiin.
Waxaa jira tusaalooyin kalkaaliyeyaal ama naqshado kala duwan oo caawiya shaqada habsami leh intaad ka maqan tahay. Si kastaba ha noqotee, adduunka dhijitaalka ah sida annaga oo kale, waxaa jira beddelkiisa kaas oo ah Kaaliyaha Virtual.
Si aan u sii gudbino xaqiiqooyin faahfaahsan oo ku saabsan waxa Shabakadaha Kaaliyaha Virtual ku saabsan yihiin, waa inaan bixinnaa jawaabaha su'aalaha ku habboon ee soo socda:
1. Waa kuma Kaaliyaha Virtual?
2. Ma yihiin kaaliyeyaasha dalwaddu?
3. Ma u baahanahay degel u kaaliye dalwaddii ah?
4. Waa maxay goobta kaaliyaha dalwaddii ugu fiican?
Waa Kuma Kaaliyaha Virtual?
Kaaliyaha Virtual -ka ee soo gaabintiisa loo yaqaan VA - badanaa waa shaqsi adeegsada kombiyuutarka, adeegsada aaladda internetka isagoo aan jir ahaan joogin. Si kale haddii loo dhigo, waxay ka shaqeeyaan meel fog.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 30ka Shirkadood ee Kaaliyayaasha Ugu Wanaagsan oo leh Rajo Wanaagsan 2022
Kaaliyeyaasha Dalwaddu Ma Baahan Yihiin?
Baahida loo qabo Kaaliyaha Virtual waa mid aad u sarreysa, gaar ahaan ganacsiyada onlaynka ah iyo ganacsatada u baahan caawimaad laakiin waxay doortaan inaysan maaliyadooda gelin qaab dhismeedka xafiiska xubnaha shaqaalaha.
Si kastaba ha noqotee, tiro aad u wanaagsan oo ah meheradaha cabbirka yar iyo kuwa dhexe ayaa adeegsada taageerada dalwaddii, gaar ahaan shaqooyinka la hubo, sida maareynta warbaahinta bulshada.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 10 Bixinta Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga sanadka 2022.
Ma u Baahanahay Website -ka Kaaliye Virtual ah?
Hal shay oo ay tahay inaad tixgeliso ka hor intaadan noqon Kaaliye Virtual waa baahiyaha degel.
Waxaa jira aragtiyo badan oo kala duwan oo jira shaqsiyaadka qaarkood oo leh uma baahnid degel haddii, tusaale ahaan, aad ku leedahay bog ganacsi oo guuleysta aaladaha warbaahinta bulshada sida Facebook ama joogitaan aad u wanaagsan LinkedIn.
Markaan intaas idhi, waxaa jira sababo badan oo wanaagsan oo ay tahay inaad ka fikirto inaad yeelato degel loogu talagalay ganacsigaaga Kaaliyaha Virtual. Tani waa sababta oo ah waxay ku caawin doontaa oo kaa dhigi doontaa mid aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad sii waddo xiriir wanaagsan oo lala yeesho macaamilkaaga.
Qaar ka mid ah sababahan ayaa ah:
Waa meel ku habboon in lagu muujiyo kartidaada, xirfaddaada iyo shaqadaadii hore loo qabtay.
Waxay u oggolaanaysaa macaamiisha mustaqbalka inay ku helaan, fiiri baakadaha aad heshay, sidoo kale waxay go'aamiyaan inaad taam tahay.
Websaydhku waa madal ku habboon oo lagu qoro baakadaha iyo qiimayaasha kala duwan - taas oo macnaheedu yahay inaan waqti dambe lagu lumin wicitaannada daahfurka iyada oo dadku kugula talinayaan inaad shaqeyso qiyaastii 2 rodol saacaddiiba!
Waxaad u oggolaan kartaa naftaada inay iftiimiso. Dadku waxay jecel yihiin inay la shaqeeyaan shaqsiyaad, kaliya maahan ganacsi qarsoodi ah.
Waxaad ka dhex muuqan doontaa tartamayaashaada.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 100ka fikradood ee ugu sareeya ganacsiga haweenka | 2022
Waa Maxay Goobta Kaaliyaha Weyn ee Ugu Fiican?
Sida ay yiraahdaan "waa istaroog kala duwan oo loogu talagalay dadka kala duwan." Goob kasta oo Kaaliyaha Virtual waxay leedahay astaamo u gaar ah oo u gaar ah waxayna u shaqeyso si kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxay u qaabeeyeen dhammaan inay ku siiyaan natiijada la rabay.
Tani waxay noo horseedaysaa inaan muujino oo aan dib u eegno 25ka sare ee Kaaliyaha Mareegaha ee Adeegyada Kaaliyaha Virtual sanadka.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 10 -ka Madal ee ugu Wanaagsan ee Hormariyaasha 2022
Waa mid ka mid ah mareegaha adeegga caawiyaha farsamada ee ugu sarreeya gudaha Mareykanka. Ganacsatada iyo milkiilayaasha ganacsigu waxay ku noqdaan isticmaalka WoodBows marka ay jirto baahi loo qabo kaaliyaha farsamada ee hufan oo la isku halayn karo ee ganacsigooda.
Qaab dhismeedka qiimaha WoodBows wuxuu ka bilaabmaa qiyaastii $49/qorshe todobaadkii ilaa 4 saacadood ee adeegyada Caawiyaha Virtual asbuuc kasta. Inta lagu jiro saacadaha uu ganacsigaagu socdo, waxaad isticmaali kartaa telefoonkaaga; saacadaha aadan isticmaalin ma dhacayaan maadaama aad wareejin karto.
Mareegtan VA waxay shaqaaleysiisaa ugu yaraan boqolkiiba hal ugu fiican khubarada Virtual ka dib markii ay tahay inay ku baadhaan habka shaqaaleysiinta saddex-tallaabo ah. Ma jiraan wax kharash ah oo la dejinayo ama qiime cad. Waxaad ku raaxaysanaysaa taageerada la doonayo oo ay ka go'an tahay 24/7 addoo isticmaalaya taleefankaaga iyo xaaladda maalinlaha ah ee cusbooneysiinta.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Intee in le'eg ayay tahay in Ardayga Kulliyadda lagu soo oogo Tababar 2022 -ka?
Websaytkan VA wuxuu bixiyaa 'ku saleysan qoraalka' kaalmo toos ah ganacsiyo badan iyo hawlo gaar ah - sida haysashada kaaliye shaqsiyeed dhammaan baahiyaha qofka.
Inta badan milkiilayaasha ganacsiga iyo hal-abuurada ganacsi waxay isticmaalaan Magic si ay qandaraas hoose ula galaan taageerada macaamiisha, suuq-geyntooda, iyo hawlaha maamulka.
Websaytkan VA ayaa si dirqi ah ugu baahan lacag bixinta kala noqoshada hore; Websaydhkan VA wuxuu leeyahay plugins leh aalado kale oo is -dhexgal ah sida telegram iyo Slack. Waxay si otomaatig ah u keydiyay keydinta degelkan VA, gaar ahaan marka ay kugu adkaato la shaqeynta kaaliyahaaga hadda. Qaab -dhismeedka qiimeynta wuxuu ku saabsan yahay $ 10/saacad kaaliye kasta.
Waxay ku saleeyeen Boggan Kaaliyaha Virtual ee Boqortooyada Ingiriiska. Websaydhku wuxuu ka caawiyaa milkiilayaasha meheradaha yaryar inay shaqaaleeyaan kaaliyayaal farsamaysan oo xirfad sare leh.
Maamulayaasha macaamiisha kuwaas oo ah kuwa aad ugu heellan caawinta, macaamiisha cusub, si loo fududeeyo shaqaaleysiinta; Caadi ahaan si toos ah ayay dib u maalgeliyaan qorshayaasha Kaaliyaha Virtual ee aan la isticmaalin bisha cusub. Qaab dhismeedka qiimaha ee ka bilaabmaya qorshayaasha xubinimadiisa waa ilaa $361.50/bishii toban saacadood oo taageero ah Kaaliyaha Virtual.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 20 Hustles Side -bixinta Lacagta Badan ee Jarmalka Hada waad Bilaabi kartaa
4. Gacmo Qurux badan
Waxay saldhig u yihiin degelkan Kaaliyaha Virtual ama shirkad ku taal Mareykanka. Oo waxaa loogu talagalay ganacsiyada raadinaya inay qandaraas hoosaad la galaan sida maareynta wicitaannada taleefanka, boos celinta, iyo hawlo kale oo shaqsiyeed.
Waxay soo rogeen qorshayaasha VA ee aan la isticmaalin ilaa bisha soo socota; waxaa jira qalab dhinac saddexaad ah oo loogu talagalay softiweerka maareynta mashruuca si loo fududeeyo mashruucaaga; waxaa jira qaab dhismeed qiimeyn ah oo ka bilaabanaya qiyaastii $ 17.99/bishii sedex codsi oo ah Adeeg Kaaliyaha Virtual.
5. Raadiyaha Shaqaalaha Fudud
Waxay saldhig u yihiin Goobtan Kaaliyaha Virtual ee Filibiin. Waa goob ku habboon VA oo loogu talagalay milkiile kasta oo ganacsi oo yar oo eegaya inuu dibadda u baxo, gaar ahaan hawlaha maamulka.
Mareegtan VA waxay leedahay xirfado is-dhexgal oo tayo leh oo aad u wanaagsan waxayna siisaa Kaaliyayaasha Virtual tayada wanaagsan.
Waxa jira kaalmo dalwad ah oo aan la qaybsanin iyo ilo bilaash ah si ay kuu caawiyaan, si aad u bilawdo, Kaaliyeyaashaada Virtual wakhtiga saxda ah; Qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa ilaa $396, taasoo ah lacag hal mar ah.
6. Waqtiga IWM
Waxay ku salaysan yihiin Kaaliyaha Virtual ee Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska. Waa shabakad kaaliyaha dalwaddii ah oo siisa adeegyo Caawima Virtual milkiilayaasha ganacsiga iyo ganacsatada.
Waxay bixiyaan caawiyayaal Virtual ah oo xirfad leh oo leh ugu yaraan 2-3 sano oo waayo-aragnimo ah adduunka kaaliyeyaasha Virtual. Intaa waxaa dheer, qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa ilaa $270/bishii 10 saacadood ee codsiyada hawleed aan xadka lahayn.
7. 24/7 Kaaliyaha Virtual
Kaaliyaha Virtual waa kaaliyaha ganacsi ee farsamada ah kaas oo bixiya caawinaad farsamaysan oo loogu talagalay hawlaha gaarka ah, oo ay ku jiraan tigidhada goosashada iyo gaarsiinta cuntada.
Waxa kale oo ay bixisaa taageerada hawlaha maamulka, suuq-geynta boostada elektarooniga ah, adeegyada hagaajinta mashiinka raadinta, iyo bogga guriga.
Ma jiraan wax lacag ah oo ganaax ah sababtoo ah waxay burin karaan adeegyada wakhti kasta. Qaab dhismeedka qiimaha ee Kaaliyaha Virtual waa inuu ka shaqeeyaa meel ka fog xeebta xafiiska, kaasoo ka bilaabmaya qiyaastii $299.
Sidoo kale, oo leh qaab-dhismeed qiime duwan oo loogu talagalay Kaaliyeyaasha Virtual ee ku sugan Mareykanka $399.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 17+ Meelaha ugu Fiican ee Madax -bannaan ee Qorayaasha 2022 -ka
Kani waa mid ka mid ah shabakadaha kaaliyayaasha dalwaddii ugu aaminka badan adeegyada loogu talagalay guryaha. Waxay sidoo kale bixisaa adeegyo suuqgeyn toos ah sida Maareynta Warbaahinta Bulshada, Hagaajinta Mashiinka Raadinta, iyo Google Ad. si ay gacan uga geystaan ​​soo jiidashada macaamiisha saxda ah ee meheradaha guryaha ma -guurtada ah.
Qaab-dhismeedka qiimeynta Goobta Kaaliyaha Virtual wuxuu ka bilaabmaa qiyaastii $ 1788/bishii illaa qorshe 12 bilood ah.
Xirfadlayaasha caafimaadku aad bay u yaqaaniin adeeggan Kaaliyaha Virtual. Waa shabakad VA saldhigeedu yahay Maraykanka oo siisa kaaliyeyaasha shaqada-guriga-guriga ee Filibiin ee hawlo badan oo daryeel caafimaad iyo maamul ah. Waxaa jira qaab dhismeedka qiimihiisu yahay $9 saacaddii.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 17 Shaqooyinka Dhinacyada Kalkaaliyeyaasha Si Fiican U Bixiya 2022
10. Dhammaan shaqada
Waa shabakad caan ah oo loogu talagalay macmiil kasta oo mustaqbalka ah oo eegaya inuu shaqaaleeyo shaqaale madax -bannaan. Waxay bixisaa kaalmo dalwaddii gelitaanka xogta, naqshadeynta garaafka, maareynta warbaahinta bulshada, iyo horumarinta goobta WordPress. Waxaa jira qaab -dhismeed qiimeyn loogu talagalay qorshaha xubinnimada oo ka bilowda $ 49.99 bishii.
Waxay ku habboon tahay ganacsi kasta oo yar oo u muuqda inuu shaqaaleysiiyo kaaliyeyaasha farsamada ee hawlaha sida naqshadeynta shabakada, nuqul qorista, iyo tafatirka podcast-ka.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhex gasho tiro badan oo profile Assistant Virtual ah oo xirfad leh si ay kaaga caawiyaan inaad hesho midka ugu habboon. Adeeg kasta oo iibsigu waxa uu leeyahay $2 khidmad farsamayn ah, $40 qiimaha adeegga, iyo 5% qiimayaasha ka sarreeya $40.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sida Looga Bilaabo Shaqadaada Online ahaan Qoraa Mawduuc Madaxbanaan ah 2022
Waa mid ka mid ah meheradaha ugu waaweyn ee shaqo abuurka ganacsi - welina si dhakhso leh ayey u koraysaa. Waxay siisaa barxad ay kula xiriiraan khubarada iyo Kaaliyayaasha Virtual ee adduunka oo dhan.
Loo -shaqeeye kasta wuxuu soo diri karaa furitaan shaqo oo bilaash ah ama wuxuu dejin karaa miisaaniyad taas oo ah in la kordhiyo dallacsiinta shaqada.
13. Shabakadda VA
Kani waa meel hal-joogsi ah si loo helo bilowgayaal iyo kaaliyayaal farsamaysan oo xirfad leh. Waxay bixisaa ilo aad u badan oo lacag la'aan ah si loo barto wax walba oo ku saabsan kaalmada dalwaddii, isku xirnaanta ama xiriirinta loo shaqeeyayaasha iyo Kaaliyayaasha Virtual -ka, iyo shaqo helidda.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 15+ Hackers Sameynta Lacagta 2022 | Samee ugu yaraan 7 isla markiiba
Waa madal ku taal Australia. Mareegtan VA waxay ku siinaysaa meel ay ganacsiyada iyo ashkhaastuba shaqaaleysiin karaan dad iskood u shaqeysta si ay uga shaqeeyaan qaybaha shaqada, sida software, isgaarsiinta, iyo iibka.
Waxay adeegsataa nooc Landmark Payment System oo sii daaya lacag-bixinta marka Caawinta Virtual laga yaabo inay dhammeeyaan hawshii loo xilsaaray oo aad 100% ku qanacsan tahay.
Waxay u qaabeeyeen qaab dhismeedka qiimaha hab ay xor u tahay in mashruuc lagu dhejiyo. Laakiin waxay bixiyaan lacag-bixin dheeraad ah oo ah 3% khidmad markaad bixinayso shaqaalahaaga xorta ah.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Dib -u -eegista Freelancer.com 2022: Ma Sameyn Karaa Mise Waa Fadeexad?
Waa goob shaqo oo caadi ah oo loogu talagalay shaqaalaha madaxa -bannaan iyo VA -yada. Madalkan, waxaad ku magacaabi kartaa adeegyadaada, waxaad dejin kartaa qiime saacadle ah, ka dibna waxaad sugi kartaa musharraxiinta - ama si toos ah u raadi macmiilka iman kara ee u baahan adeegyadaada oo soo gudbin soo jeedin. Ma jiraan wax kharash ah oo ku saabsan soo gelitaanka ama dhajinta dalabka shaqo.
Waa shabakad kaaliyaha Virtual ah oo kaa caawinaysa balaadhinta ganacsigaaga oo kaa caawin doona raadinta macaamiisha mustaqbalka.
Goobtan VA waxay siisaa ganacsiyada gacanyaraha maamul ee wax ka qaban kara gelitaanka xogta, cilmi-baadhista qorsheynta dhacdada, iyo hawlo kale. Qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ku saabsan yahay $449 bishiiba 12 saacadood oo shaqo shaqo ah.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sida Loo Sameeyo $ 100+ PayPal Maalin kasta (Tilmaan Buuxo)
17. Dhab ahaantii
Waa goob bilaash ah oo loogu talagalay hibada caawiyaha farsamada, halkaas oo VAs ay ku dhejin karaan resume/CV, ka raadsan karaan shaqooyin, abuuri karaan iimaylo digniin shaqo, kaydiya oo si toos ah u codsan kara.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira ku darida liiska shaqada ee guddiyada shaqada ee muhiimka ah, ururada, wargeysyada, iyo boggaga shaqada ee aasaaska. Loo-shaqeeyayaashu sidoo kale waxay si toos ah shaqooyinka ugu dhejin karaan Runtii.
Shirkadan mareegaha VA waxay siisaa qorshayaal ganacsi oo hada bilaabay, shirkad koraysa, iyo dadka.
Waxay sameeyaan kaaliyeyaal si wanaagsan loogu tababaray xirfado kala duwan oo leh ugu yaraan saddex sano oo waayo-aragnimo ah. Qaab dhismeedka qiimaha goobtan VA wuxuu ka bilaabmaa $498 bishiiba ilaa 25 saacadood bishii adeega.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 15 Shaqooyinka Internetka ee Waqti-Waqtiga ugu Fiican Sanadka 2022-ka
19. Kaaliyeyaasha Virtual ee VaVa
Mareegtan VA waxay ku fiican tahay ganacsatada doonaya inay kor u qaadaan ganacsigooda.
Waxay bixiyaan kaaliyayaal xirfad leh oo ku jira warbaahinta bulshada, xisaabinta, naqshadaynta shabakada, calaamadaynta, naqshadaynta garaafyada, iyo iwm.
Kani waa kaaliye dalwaddii weyn u ah xalalka shaqaaleysiinta haddii aad raadinayso inaad kireysato VA, istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada, buug-hayaha farsamada, ama xitaa khabiir shabakadeed.
Shabakaddan kaaliyaha dalwaddu waxay siisaa VA-yada ugu yaraan shan sano oo waayo-aragnimo shaqo ah iyo xoogaa khibrad shaqo oo fogaan ah.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Shaqooyinka Bixiya $20 Saacadii Shahaado La'aan 2022| Codso Hadda
Waa shirkad kaaliyaha farsamada gacanta ah oo fadhigeedu yahay Mareykanka taas oo diiradda saareysa caawinta maamulayaasha.
Waxay siisaa koox xirfad sare leh oo ka go'an ama ka go'an oo si wanaagsan loo maareeyay kaaliyeyaasha farsamada kuwaas oo awood u leh inay si fudud ula qabsadaan yoolalka ganacsiga iyo doorbidyada.
Qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $1200 bishiiba ilaa 55 saacadood oo adeeg bishii ah.
Waxa loo yaqaannay Worldwide101. Waa mid ka mid ah shirkadaha caawiya farsamada gacanta ama mareegaha aad hadda ka heli karto agagaarka.
Waxay bixiyaan kaaliye farsamo oo xirfad sare leh, tayo leh, iyo la isku halayn karo oo hadda bixiya adeegyo aad u wanaagsan. Qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $1470 bishiiba ilaa 30 saacadood oo adeeg ah.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 19 Hiwaayadood oo Lacag kuu Sameeya 2022
Waxaa jira bixinta caawiyayaasha farsamada iyo adeegyada kuwaas oo ka bixiya bilowga, ganacsiyada yaryar/yar yar, iyo ganacsatada.
Halkan, waxaad ka heli kartaa caawiyeyaal aad u tababaran oo tayo gaar ah leh oo ku takhasusay maamulka iyo shaqada wadaadka ee dhammaan noocyada warshadaha. Qaab dhismeedka qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $1059 bishiiba kaaliyaha qaybsan.
Shabakaddan kaaliyaha dalwaddu waxay bixisaa adeegyo ganacsi oo Hal abuur leh, fulineed iyo mid farsamo.
Waxay sidoo kale bixiyaan barnaamij dib-u-celin ah oo caawiya hay'adaha samafalka iyo kooxaha aan faa'iido doonka ahayn si ay u guuleystaan.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 13 Shaqooyin Online Degdeg ah oo Fudud oo loogu talagalay Ardayda Kulliyadda 2022 -ka
25. Shaqaale Virtual ah
Waa xal kale oo heersare ah haddii aad raadinayso ganacsi kaaliyaha Virtual.
Waxay bixiyaan adeegyo shaqaale toos ah dhammaan qaybaha sida sharciga, barnaamijyada software-ka, xisaabaadka, iyo meelaha kale ee aan farsamada ahayn. Qaab dhismeedkan qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa $4.5 saacadii.
Sideen ula Xidhiidhaa Kaaliyahayga Virtual?
Caadiyan, waxaad kula xiriiri doontaa shaqaalahaaga boostada elektaroonigga ah iyo Skype.
Ma ku dhejin karnaa faahfaahinta kaaliyeheena dalwaddu mareegahayada?
Haa, waad awoodaa Waxaa lagula talinayaa.
Ma siin karnaa kaaliyeheena dalwaddu cinwaan iimayl?
Haa, waad awoodaa Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad samaysato cinwaan elektaroonik ah oo leh faahfaahinta xafiiskaaga iyo malaha sawir.
Ma inaan ku jiraa warshadaha guryaha ma guurtada ah?
Uma baahnid Waxay siin karaan Kaaliyeyaasha Virtual warshado badan.
Runtii ma ka shaqayn karaa meel kasta oo adduunka ah?
Haa, waad awoodaa Waxaad si joogto ah u shaqayn kartaa intaad safraysid iyo sidoo kale kaaliyayaal kale oo badan.
Waxay u tixgeliyaan Kaaliyaha Virtual inta badan kaaliye shaqsiyeed ama kaaliye maamule kaa caawiya meel fog.
Ogsoonow in kaaliyahaaga khadka tooska ah uu halkaas ku saxan yahay si uu u xalliyo dhammaan dhibaatooyinka iyo hawlaha yaryar, taas oo kuu keenaysa walaac aad u weyn. Iyo sababta oo ah taageeradan maamul ama adeegyada farsamada, waxaad diiradda saari kartaa hawlaha muhiimka ah.
Adeegsiga kaaliye shaqsiyeed oo onlayn ah ayaa kaa badbaadin kara saacadaha shaqada oo dhan toddobaadka oo dhan.
100ka fikradood ee ugu sareeya ganacsiga haweenka | 2022
Sida Loogu Qoro Maadad Ku Qoran Madalkan
Mawduucyada liiska ku jira waa qoraal blog oo dhammaystiran oo doonaya in lagu wargeliyo akhristayaasha wax ku saabsan mawduuc gaar ah.…
Marka aan ka fikirno dhaqdhaqaaqa dhinaca is-dhexgalka ah, waxaan tixgelineynaa shaqooyinka aan u baahnayn hadal, iibin fool-ka-fool ah, shaqeyn ...